🥇 ▷ dib u eegida astaamaha iyo qiimaha ✅
dib u eegida astaamaha iyo qiimaha
Sharaxaadda qaaciddada lagu guuleysto
Kaliya ka saar sanduuqa, iPhone 11 wuxuu gudbiyaa dareen aad u lamid ah kan iPhone XR. Sababtuna waa mid aad u fudud: labada taleefannadu waa isku mid – marka loo fiirsado bilic ahaan – marka laga reebo sanduuqa cusub ee kaamirooyinka ku yaal iyo midabyo cusub oo la cusbooneysiiyay. Miisaanka, cabirka iyo walxaha la isticmaalay kama kala duwanaansho hal nooc oo nooc kale ah.
Qaar ayaa laga yaabaa inay u arkaan sii wadista this aragti taban, laakiin runta, si daacad ah, gebi ahaanba ka soo horjeedda. Isaga iPhone XR waa mid ka mid ah moodooyinka ugu miisaaman ee cabirka iyo raaxada in Apple uu u qaabeeyey taariikhda; sidaa darteed, in iPhone 11 uu dhaxlo isla “caaryada” shaki la’aan waa go’aan aad u caqli badan soosaaraha.
Marka loo barbardhigo iPhone 11 Pro, moodalka “tirada badan” wuxuu dareemayaa raaxo yar – maxaa yeelay wuxuu isku khilaafsan yahay birta iyo muraayadaha matiishada, kuwaas oo siiya taabashadaas farqiga u dhexeeya – laakiin, in kasta oo ay taasi jirto, gudbiyaa dareen aad u badan lacag bixin inta badan casriga isla qiime ka duwan. Intaa waxaa sii dheer, waa mid aad u deggan maalinba maalinta ka dambeysa, waa wax geesiyaasheeda wareegsan iyo qalooca qalloocan ee galaaska kore iyo kan hoose, ay si sax ah ugu darayaan jirridka aluminiumka ku yaal dhinaca.
Marka laga hadlayo midabada, Apple Wuxuu doortay shax ka duwan kan qarnigii hore, kaasoo, aniga ahaan, u ahaa guul. Fanaanka cusub ee koromatikada wuxuu ka koobanyahay Classics madow iyo caddaan, casaan muuqda (Wax soo saar) RED iyo saddex hadh oo pastel soo jiidasho leh: midab, cagaar iyo jaale.
Qeybta loo xilsaaray Hypertext, sida lagu arki karo sawirada, waa mid mauve ah, waa mid ka mid ah labada shaati ee ugu xiisaha badan jiilka cusub. Qof ahaan, waxay ku siisaa qiyaasta ugu habboon ee asal ahaan. Waa maxay kala duwan oo ku filan si aad u hesho dareenka Meel kasta oo ay tagto, laakiin waxay ka ilaalisaa xad-dhaafnimada in, mudada dheer, had iyo jeer ku dhammaato sharafdarrada sumcadda sheyga.
Wixii ka dambeeya bilicsanaanta, Apple waxay sheeganeysaa inay wanaajiso cimri dhererka iyada oo la xoojinayo kirismaska ​​kore iyo kan hoose iyo shaabadaynta wanaagsan. lidka ka hortagga. Natiijo ahaan, iPhone 11 hadda waa la quusin karaa 30 daqiiqo ugu badnaan laba mitir.
A13 chip waa xudunta wax walba
Gudaha iPhone 11 waa SoC cusub A13 Bionic, oo gabi ahaanba loogu talagalay Apple. Marka loo eego jiilkii hore, tani waxay ku kordhineysaa ilaa 20% awoodda waxqabadka dheeriga ah ee dhammaan aagagga, sidaas darteed waxay ka sarreysaa dhammaan xulashooyinka shirkadaha sida Qualcomm, Samsung ama Huawei. Intaa waxaa sii dheer, chipkani wuxuu soo bandhigayaa waxyaabo cusub sida matrix xisaabinta kobcinta, kaas oo heli doona muhiimad dheeri ah maaddaama xaqiiqda jirta ee la cusbooneysiiyay ay ku socoto dariiqa alaabada iyo adeegyada shirkadda.
Dhammaan horumarinnada laga sameeyay SoC ma aha oo keliya inay gacan ka geystaan ​​si dhakhso leh jawaabta codsiyada ama tirooyinka sare ee tijaabooyinka waxqabadka; Waxay sidoo kale aasaas u yihiin taas oo lagu horumarinayo astaamaha hal-abuurka ah ee ka dhigaya iPhone 11 mid ka caqli badan, uguna karti badan isla markaana madaxbannaani u leh qaabkiisii ​​hore.
A13 Bionic cusubi waxay bixisaa ku dhawaad ​​20% awooda waxqabadka dheeriga ah ee meelaha oo dhan.
Kamarada, tusaale ahaan, waa mid ka mid ah aagagga sida ugu badan uga faa’iidaysta hagaajinta lagu daro Bionic A13. Qaabka cusub wuxuu ka kooban yahay 12 megapixel sensor weyn (oo leh ujeeddo fudeed f / 1.8) iyo xagal ballaaran oo isku mid ah oo isku mid ah (oo ay weheliso ujeedka aperture of f / 2.4). Tan waxaan ku qasbanahay inaan ku darno, dhinacna, nidaamka HD HDR (oo la hagaajiyay marka loo barbar dhigo iPhone XR) iyo, dhinaca kale, habka xiisaha leh ee habeenkii.
Apple waxay isku dayday, jiilkan cusub, qaado sawirkaaga kombiyuutarkaaga hal talaabo horey u qaad – taageerida A13 Bionic-ka cusub – laakiin, si ka duwan noocyada kale, soo-saaraha Marekanka ah wuxuu ku sameeyay isaga oo aan u huray dhex-dhexaadnimada sawirradiisa iyo istiraatijiyad aad u caqli badan oo u maareysa inuu si joogto ah u noqdo natiijooyinka uu soo saaro – taas oo ah mid aad muhiim u ah in la dareemo raaxo. leh kamarad oo soosaara waxqabadka ugu sarreeya muddada fog.
Falsafaddan ayaa si fiican loogu muujinayaa, tusaale ahaan, tan cusub hab habeenkii, kaas oo si toos ah u shaqeynaya, iyada oo aan faragalin la sameyn, marka iPhone 11 uu ogaado in deegaanku gaar ahaan mugdi yahay. Si loo helo natiijada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah, algorithm-ka ayaa falanqeynaya, toban meelood meel laba, laba qiyaasood oo waaweyn: imisa iftiin aad ugu baahan tahay inaad si sax ah u iftiimiso goobta iyo waxa xasilloonida sawir qaade iyo maaddooyinka ay leeyihiin labadaba. Iyada oo ku saleysan tan, nidaamku wuxuu go’aaminayaa muddada aad u qaadan karto sawirrada kala duwan ee lagama maarmaanka u ah iyo waxa qiimayaasha soo-gaadhista iyo ISO mid walba ay qaadan karto.
Kadib, markii xiriyaha la cadaadiyo, taleefanka ayaa bilaabaya falanqaynta sawirrada la qabtay iyo isku dar macluumaadkaaga si caqli leh: Isku hagaaji ishaarooyinka si loo saxo dhaqdhaqaaq kasta oo suurta gal ah goobta, iska tuur aagagga aan casharka laheyn, isku dheelitiro isbarbardhiga iyo midabbada, kor u qaad faahfaahinta isla markaana yareynta dhawaqa suurtagalka ah ee ku jira qaababka qaarkood Iyo waxaas oo dhan, marka lagu daro sameynta saxda ah, waxay ku socodsiiyaan wax ka yar hal ilbiriqsi.
Habeenki habeenkii wuu firfircoon yahay.
Si kastaba ha noqotee, waxa ugu xiisaha badan, sida aan sheegay, waa habka loo adeegsado algorithmka cusub “garsoora” iyo “go’aansada” inta lagu jiro hawshan. Nidaamyo badan oo hababka habeenkii ah – oo ku jira taleefanno tartan – ayaa badanaa dilaya saadaasha hadhka, xad-dhaafka ah iyo maydhista muuqaalka, taas oo yareynaysa dabeecadda, shakhsiyadda iyo xaqiiqada dhabta ah sawirka ugu dambeeya. AppleOn dhanka kale, waxay ku shaqeysaa sawirada si caqli iyo cadaalad ah: waxay iftiimineysaa goobta, laakiin iyadoon wax u dhimin shaqsiyadeeda iyo xaqiiqadeeda.
Tan waa inaan ku soo darno, intaas ka sokow, in geedi socodka oo dhan si iskiis ah ayaa loo sameeyaa. Adeeggu wuu beddeli karaa hawlgalka haddii la doonayo – firfircooni ama baabi’iyo howsha, wuxuu dheereeyaa waqtiga qabashada, iwm – laakiin, haddii aysan soo faragalin, waa taleefanka, si caqli iyo qarsoodi ah, u go’aamiya waxa la sameeyo iyo sida loo sameeyo . Kumaa garanaya sawir qaadista ciyaarta iyo tijaabinta; laakiin aan aqoon u lahayn ISOs iyo wakhtiyada soo-gaadhista, iska indho tiri kara oo ku raaxaysan kara oo keliya sawirrada aadka u wanaagsan ee ka dhashay hab-dhaqanka habeenkii.
Dhanka kale, Apple Waxay sidoo kale hagaajisay nidaamka Smart HDR, kaas oo sameeya qabashooyin kala duwan oo leh muuqaallo kaladuwan, waxay isku daraan wakhtiga dhabta ah oo si shaqsiyan u hagaajiya mid kasta oo ka mid ah aagagga kala duwan ee isla goobta. Nooca cusub ee nidaamkani wuxuu hadda awood u leeyahay inuu si madax-bannaani u socod siiyo wajiyada dadka, isaga oo siinaya taabasho tayo dheeri ah labadaba selfie Sida kamaradda dambe. The dhawaaqyada maqaarka ayaa xoogaa guulo leh, nalku waa mid aad u saxsan oo sii wadida goobta inteeda kale ayaa kordheysa.
Waxa kale oo jira horumar la taaban karo oo ku saabsan muuqaalka muuqaalka, sawirrada daawaynta hadhka iyo isu-dheellitirka midabka. Natiijooyinka runtii waa kuwo la yaab leh.
Sawir lagu qabtay kamarad caadi ah.
Sawir leh xagal ballaadhan.
Marka laga hadlayo xagasha ballaadhan, laba shay oo keliya ayaa laga odhanayaa: dhinaca, waxay bixisaa ciyaar badan xaaladaha qaarkood; iyo, dhinaca kale, in daryeelkaas loo qaadaa xaaladaha iftiinka xun. Furitaanka f / 2.4 iyo maqnaanshaha OIS ayaa ka hor imaaneysa oo ka dhigaysa sawirrada inay yeeshaan dhawaqyo iyo dhirbaaxad ka yar kuwa lagu qabtay kamaradda weyn.
Ilaa iyo inta selfie Waxay tixraacaysaa, horumarintiisu waa mid aad u muhiim ah marka la barbardhigo moodooyinka hore ee sumadda. Qalabka cusub ee ‘megapixel’ 12-ka cusub wuxuu aad ugu fiican yahay si walba (midab, afkisa, laydhkiisa, kala duwanaansho firfircoon…). Intaa waxaa u dheer, muraayadaha la socda waxay leedahay xagal ballaaran, sidaa darteed, adoo riixaya badhan cusub oo ku yaal interface kaameerada, isticmaaleygu wuxuu fidin karaa muuqaalka aragtida wuxuuna ku dari karaa dad badan ama shay sawir ah.
Sidoo kale hagaajin ka badan habka sawir XR iPhone, kaas oo hada la shaqeeya shay kasta – oo aan ku koobnayn dadka. Si taas loo gaadho, waxay ku tiirsan tahay macluumaadka ay ku wareejiso xagal ballaadhan, kaasoo u oggolaanaya inuu “saddex-xagal galo” macluumaadka si la mid ah isha aadanaha. Natiijooyinka ayaa inta badan ah kuwa wanaagsan, in kasta oo, mararka qaarkood, kala-goynta maaddada guud iyo asalka u muuqdo in yar oo sax ah marka loo eego moodooyinka kale ee iPhone (sida XS ama 11 Pro). Dhanka kale, hagaajinta horey loogu soo sheegay nidaamka Smart HDR sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa sameynta sawirrada aadanaha ay u egyihiin xitaa kuwo ka sii fiican: qeexitaan yar, iftiin wanaagsan iyo isu dheelitirnaan weyn.
Marka laga hadlayo fiidiyowga, Apple Waxay sameysay seddex horumarin oo waaweyn: u soo qaad waxqabadka sare ee firfircoon ee ugu sarreeya muuqaalkeeda fiidiyowga ugu sarreeya (4K at 60 FPS), u oggolow duubista heerkan oo leh kamarad kasta oo taleefanka ah kuna soo bandhigaysa duubista fiidiyowga mooshinka ah ee kaamirada hore. – maxay u wacayaan caajisyada-. Haddii iPhone XR / XS horeyba u ahaan jiray taleefanka casriga ah oo leh tayo fiidiyoow oo ka sii wanaagsan, iPhone 11 wuxuu u qaadanayaa tallaabo dheeri ah.
Muxuu iPhone 11 uusan u laheyn 5G? Jawaab gaaban: maxaa yeelay shabakadaha intabadan ma jiraan, modem waa kuwo aan fiicnayn oo, marka lagu daro, kiisaska isticmaalka la xiriira casriga Aad bay u yaryihiin. Jawaabta dheer: waxaad ka akhrisan kartaa falanqayntaan shabakadda Vodafone 5G ee magaalada Madrid.
Wajiga ID-ga ayaa hadda si muuqata loo dareemayaa si deg deg ah waxaana lagu gartaa dhinacyo badan xitaa. Hagaajinta koowaad waa arin software – Xaqiiqdiina waxay gaari doontaa dhammaan iPhone-ka oo leh iOS 13–. Midda labaad, si kastaba ha noqotee, waxaa sabab u ah muraayadaha lagu daray kamaradaha hore (xagalkiisu weyn yahay).
Madax-bannaanida sadarka moodelkii hore. Apple waxay hubisaa in iPhone 11 ay soo bandhigaan Hal saac in ka badan oo isticmaalka ah oo ka badan XR ah, iyo khibradda adeegsiga dhowr maalmood sidaa darteed ayaa caddaynaysa. Waxaad la kulmi kartaa maalin adeegsi aad u daran adigoon dhibaato iyo walaac midna lahayn.
Muuqaalka ugu fiican ee Liquid Retina. Haa, qaraarkiisu ma noqonayo HD buuxa, laakiin cufnaanta pixel waa mid aad u sarreysa oo aan ka fiirsan kala duwanaanshaha. Marka laga soo tago taas, guddigu waxay bixiyaan tayo aad u fiican labadaba matalaad midab iyo iftiin ugu badnaan.
Adaabiyaha lacagta degdegga ah waa in lagu daraa sanduuqa. Jiilka cusub ee iPhone wuxuu kuxari karaa batterigaaga xawaare deg deg ah haddii aad isticmaasho adabtarada shirkadda 18W. Laakiin si kastaba ha noqotee, Apple Waxay kaliya ku daraysaa kiisaska iPhone 11 Pro, kuma eka iPhone 11. Kuwa wax iibsada ee qaabkan labaad, haddii ay rabaan inay si dhaqso leh taleefanka dib ugu buuxiyaan, waa inay si gooni gooni ah u iibsadaan adaparka, taasoo macno u sameynaynin tixgelinta sheygu wuxuu qaali yahay 800 euro.